Izinhlobo: okungeyona eyinyumba
Izinto: zokwenziwa injoloba nitrile
Impilo eshalofini: iminyaka emi-3
Izimo zokugcina: ukufiphaza, ukufakazela umswakama, izinga lokushisa eliphakeme kanye nemvelo ye-ozone
Izinto: NBR; Imodeli: S \_ M \_ L \_ XL Uhlobo: alunampuphu; Umbala: oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe, eminye imibala nayo ingakhiqizwa ngokuya ngesidingo; Ibanga: ibanga lezokwelapha; Ukupakisha: 100pcs noma 200pcs / ibhokisi, 10 amabhokisi / ibhokisi, futhi kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende. Ukusetshenziswa komkhiqizo: Kufanelekile ukuhlolwa kwezokwelapha, ukwelashwa kwamazinyo, ukunakekelwa kwezempilo, ukunakekelwa kwasekhaya, ilabhorethri neminye imikhakha ehlobene. Isitifiketi se-US FDA, isitifiketi se-EU CE, isitifiketi sokubhaliswa kwedivayisi yezokwelapha yaseChina Izici zomkhiqizo: - Ukwelashwa ngaphezulu kuhlukaniswe kwaba yi-hemp surface nomunwe we-hemp surface, okulula ukuyithatha nokusebenza; - Ukwelashwa kwangaphakathi kuhlukaniswe nge-chlorine wash kanye ne-PU coating, okulula ukugqoka; - Amagilavu ​​athambile, anwebeka ukumelana, anethezekile ukugqoka, okulingana kahle ngesandla.
Umkhiqizo Model I-WS-MED-GN
Thayipha I-Nitrile £ PVC / Vinyl R
Amazinga womkhiqizo I-EN455 £ ASTM 6319 £
Umbala Okumhlophe R Blue ■ £ purple R ■ £ pink ■ R
Zonke Usayizi: Ncane (S) / Medium (M) / Large (L)
Awunampuphu Ukuzwa kwemvelo ngokuphelele
Izinto I-Nitrile (Ayenziwe nge-latex yemvelo yerabha)
Izinga Ibanga lezokwelapha
Ukusetshenziswa Ukuvikelwa Okuvamile
Ukutholakala Ukusetshenziswa okukodwa kuphela
Izwe azalelwe kulo I-China
Umkhiqizi / Umhlinzeki Jiangsu I-Jinlian Medical Technology Co, Ltd
Imininingwane Yokufaka Komkhiqizo
1. Ukumelana okuvelele kwamakhemikhali, anti i-asidi ethile ne-alkalinity, kunikeza ukuvikelwa okuhle kwamakhemikhali ezintweni ezonakalisayo ezifana ne-solvents ne-petroleum.
2. izakhiwo ezinhle zomzimba, ukumelana okuhle nokudwengula, ukumelana nokubhoboza, izakhiwo ezilwa nokungqubuzana.
3. isitayela entofontofo, ngokusho komklamo we-ergonomic womshini wegilavu ​​wesundu ogoba iminwe ukwenza ukugqoka okunethezekile futhi okulungele ukusakazwa kwegazi.
4. ayiqukethe amaprotheni, amino compounds nezinye izinto eziyingozi, kuyaqabukela kukhiqize ukungezwani komzimba.
Isikhathi esifushane sokucekelwa phansi, okulula ukusiphatha, esivumayo ekuvikelweni kwemvelo.
6. ayikho ingxenye ye-silicon, enokusebenza okuthile okulwa ne-static, efanelekile kwizidingo zokukhiqizwa komkhakha we-elekthronikhi.
7. Izinsalela zamakhemikhali eziphansi phezulu, okuqukethwe kwe-ionic ephansi, okuqukethwe kwezinhlayiyana ezincane, ezifanele imvelo ehlanzekile eqinile yegumbi.
Ukuhlanza isikhunta ngesandla Ihhavini lokugcina → Ukukhishwa kwangaphambi kwesikhathi → Kudilizwa → Ukuhlolwa → Ukupakisha → Ukugcina → Ukuhambisa
Khetha usayizi ofanele kakhulu
Ukuqinisekisa ukuthi amagilavu ​​akho anokulingana okuhle nokuzizwa okuhle, sidale leli shadi elilungisayo lokusiza.Sicela ukhumbule ukuthi amagilavu ​​afana nezicathulo: kukhona osayizi abajwayelekile, kepha izitayela ezahlukahlukene zizolingana ngokuhlukile..Sicela uthole usayizi weglavu yakho ulinganise isilinganiso sakho isandla sisebenzisa umhlahlandlela ongezansi.
9 `` Ubude (mm)
Ububanzi besundu (mm)
Amandla eqine (Mpa)
Ububanzi besandla 85 ± 10mm
ubude ≧ 230mm, 3.0 ± 0.2 amagremu.
Okulingene (M) Ububanzi besandla 95 ± 10mm
ubude ≧ 230mm ± 0.3mm, 3.5 ± 0.2grams.
Okukhulu (L) Ububanzi besandla 110 ± 10mm
ubude ≧ 230mm, 3.9 ± 0.2 amagremu.
X Enkulu (XL) Ububanzi besandla 120 ± 10mm
ubude ≧ 230mm, 4.3 ± 0.2 amagremu.
Ukubhoboza okuhle nokumelana nezinyembezi ▲
Ukuzwela okuphezulu touch
Ukuqina komoya ▲
Imisebenzi yasendlini, elekthronikhi, ikhemikhali, amanzi, ingilazi, ukudla nokunye ukuvikelwa kwefektri, izibhedlela, ucwaningo lwesayensi nezinye izimboni; esetshenziswa kabanzi kuma-semiconductors, ukunemba kokufakwa kokuqina okunamandla kwe-elekthronikhi nezinsimbi nokusebenza kwezinsimbi ezinamathelayo zensimbi, ukufakwa nokuthunyelwa kwemikhiqizo yobuchwepheshe obuphezulu, amadrayivu wediski, izinto ezihlanganisiwe, amamitha wokubonisa e-LCD, imigqa yokukhiqiza ibhodi yesekethe, imikhiqizo ebonakalayo, amalebhu, izibhedlela , izindawo zokucwala ubuhle neminye imikhakha.
imisebenzi yasendlini ▲
UJiangsu Jinlian Medical ungumhlinzeki wamagilavu ​​e-nitrile eChina, Amagilavu ​​wezokwelapha ayizibonelo zemishini yokuvikela yomuntu siqu esetshenziselwa ukuvikela oyigqokile kanye / noma isiguli ekusakazekeni kokutheleleka noma ukugula ngesikhathi senqubo yezokwelapha kanye nezivivinyo. Amagilavu ​​wezokwelapha ayingxenye yecebo lokulawula ukutheleleka.
Jiangsu Jinlian Medical Nitrile glove umphakeli ifektri kukhiqizwa Medical amagilavu ​​(Nitrile) yenziwa emulsion polymerization ka butadiene kanye acrylonitrile. Ukuze uthuthukise amandla okubopha kanye nezakhiwo zomzimba nezomshini wejel emanzi ne-vulcanizate, Iningi le-nitrile latexes liguqulwa ngama-monomers avela eceleni aqukethe amaqembu e-carboxyl ngesikhathi se-copolymerization. Ama-carboxyl monomers asetshenziswa kakhulu afaka i-acrylic acid ne-methacrylic acid.
I-Carboxylic nitrile latex Ingakuthuthukisa kakhulu ukuzinza kwemishini, ukumelana nowoyela nokumelana nokuguga kwe-latex.
Langaphambilini Zokwenziwa Silky alahlwayo TPE Gloves
Olandelayo: I-NIOSH Uthuli Buso N95 Mask
Amagilavu ​​we-Blue Nitrile
Blue Nitrile Gloves Powder Mahhala
Alahlwayo Nitrile Gloves Powder Mahhala
I-Nitrile Powder Free Gloves
Amagilavu ​​Wokuhlolwa KwamaNitrile Wamahhala